न्यूनतम क्रिसमस तालिकाको लागि सजावट विचारहरू | बेजिया
न्यूनतम क्रिसमस तालिकाको लागि सजावट विचारहरू
मारिया vazquez | 03/12/2021 18:00 | अद्यावधिक गरियो 30/11/2021 20:33 | सजावट
हाम्रो क्रिसमस तालिकाहरू थोरै न्यूनतम हुन्छन्, तर सबै परम्पराहरू जस्तै यो पनि धेरै घरहरूमा परिवर्तन हुँदैछ। हामी मध्ये धेरै छन् जो एक मात्र होइन न्यूनतम सजावट, तर सरलीकृत मेनुको लागि पनि। र पक्कै पनि जब तपाइँ हाम्रो विचारहरू एक न्यूनतम क्रिसमस टेबल सजाउन देख्नुहुन्छ तपाइँ केहि थप हुनुहुनेछ।
एक न्यूनतम तालिका नरम, बोरिंग, वा धेरै उत्सव नहुनु हुँदैन जसरी केही कुराकानीहरूमा यो पुष्टि हुन्छ। त्यो सत्य हो तिनीहरू सास फेर्न टेबलहरू हुन् र जसमा सजावटी तत्वहरू सरलीकृत छन्, तर यदि उपयुक्त छनोट गरियो भने, के मनाइँदैछ भन्ने बारे कुनै शंका हुनेछैन।
कभर छविहरूले हामीलाई न्यूनतम तालिकाको अर्थ के हो भनेर एक सिंहावलोकन गर्न प्रेरित गर्दछ। तिनीहरू तालिकाहरू हुन् जसमा तटस्थ रंगहरू छनौट गरिन्छ, यद्यपि यो केस नहुन सक्छ, र जसमा विशेष तत्वहरू थोरै छन् तर छानिएका छन्.
3 नैपकिन संग विवरण
यी विशेषताहरूको तालिकामा टेबलक्लोथको ठूलो भूमिका छ, यद्यपि यसले अत्यधिक ध्यान आकर्षित गर्दैन। सट्टेबाजी गरेर प्राप्त हुने सामग्रीहरू प्राकृतिक कपडा मा डिजाइन जसले टेबुलमा सुन्दरता र संयमता ल्याउँछ।
सेतो वा हल्का खैरो लिनेन टेबलक्लोथ यस प्रकारको टेबल सजाउन सधैं सफल हुन्छ। तिनीहरू रङहरू हुन् जसले हामीलाई सीमित गर्दैनन् र जुन हामीसँग घरमा भएको सेतो टेबलवेयरसँग सधैं राम्रोसँग फिट हुन्छ। यसको भागको लागि, खैरो वा कालो जस्तै रंग तिनीहरू थप बलको साथ टेबल खोज्नेहरूको लागि उपयुक्त छन्।
यो चाखलाग्दो छ कि टेबलक्लोथ र क्रोकरी बीचमा छन् केही विपरीत। यसैले, सेतो लिनेनको साथ टेबलमा, आदर्श हल्का खैरो टोनमा टेबलवेयर राख्नु र यसको विपरीत हुनेछ। र त्यसै गरी, खैरो टेबलक्लोथको साथ टेबलमा, कालो प्लेटहरू सधैं राम्रो देखिन्छन्।
यद्यपि यी साना विरोधाभासहरू हाल एक प्रवृत्ति हो, ए सिर्जना गर्ने विचार नछोड्नुहोस् मोनोक्रोमेटिक तालिका एउटै रंगको टेबल लिनेन र क्रोकरी संयोजन। यो शर्त विशेष गरी रोचक छ जब हामी सेतो र विशेष गरी कालो बारे कुरा गर्छौं। जब यो कालोमा आउँछ, कालोमा सबै कुरा सट्टेबाजी गर्नु उत्तम निर्णय हो।
नैपकिन संग विवरण
प्लेट मा नैपकिन केहि सानो विवरण संग हुन सक्छ। वास्तवमा, समावेश गर्नुहोस् हस्तनिर्मित विवरण माथिको तस्विरमा कार्डबोर्ड ताराहरू वा स्याउ चिप्स जस्तै, यो हाम्रा पाहुनाहरूको लागि राम्रो स्पर्श हुन सक्छ।
तपाइँ यसलाई अरूसँग संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँaमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ पार्क मा सानो पैदल नजिकको (शाखाहरू, पातहरू, पाइनकोनहरू ...) वा तपाईंको प्यान्ट्रीमा (एनिज ताराहरू, दालचीनी स्टिकहरू ...)। सेट समाप्त गर्न तपाईंलाई केवल डोरी वा धनु आवश्यक पर्दछ।
न्यूनतम क्रिसमस तालिकामा त्यहाँ केन्द्रविन्दु त्याग्न कुनै कारण छैन। कहिलेकाहीँ, हामी गल्तीले सोच्दछौं कि एक न्यूनतम ठाउँ एक हो जसमा हामी सजावटी विवरणहरू त्याग्छौं र वास्तविकताबाट केहि पनि छैन। हामीले तल देखाउनेहरू, उदाहरणका लागि, यस शैलीको तालिकाहरूमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ।
न्यूनतम तालिका सजाउनको लागि केन्द्रविन्दुहरू सिर्जना गर्न तपाईं धेरै जटिल हुनुपर्दैन। एउटै क्रोकरीको स्रोत वा प्लेटले केही राख्नको लागि समर्थनको रूपमा सेवा गर्न सक्छ मैनबत्ती र केही बिरुवा तत्वहरू जसले रंग र भोल्युम प्रदान गर्दछ। काई र पातहरू भएका केही हाँगाहरू यदि तपाईं हरियोका विभिन्न रंगहरूको विशिष्टताको ताजापन खोज्दै हुनुहुन्छ भने; अनानास र सुख्खा शाखाहरू यदि तपाइँ खैरो टोनको संयमता मनपर्छ भने।
मैनबत्तीहरू सधैं सफल हुन्छन् किनभने तिनीहरूले हामीलाई रातको खाना अघि र पछि कोठामा वातावरण सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। र उल्लेखित बिरुवा केन्द्रहरू बाहेक, तपाइँ तिनीहरूलाई टेबलमा राख्न सक्नुहुन्छ आधुनिक डिजाइन झूमर वा तपाईंले चित्रहरूमा देखेको जस्तै काठको बलहरूमा। यी, अन्य काठ तत्वहरु संग एक तालिका पुन: सिर्जना गर्न को लागी आदर्श हो नर्डिक शैली र यसमा न्यानोपन ल्याउनुहोस्, के तपाईं सहमत हुनुहुन्न?
के तपाईंलाई न्यूनतम क्रिसमस तालिकाको लागि यी सजावट विचारहरू मनपर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » न्यूनतम क्रिसमस तालिकाको लागि सजावट विचारहरू
बच्चाहरु मा ADHD को बारे मा5प्रश्नहरु
दिनको हरेक क्षणको लागि लेगिंगहरू संयोजन गर्ने विचारहरू